इन्ट्यान्ट म्यासेन्जिङ्ग एप ह्वाट्सएपको यूजर संख्या २ अर्ब पुग्यो - Technology Khabar
» इन्ट्यान्ट म्यासेन्जिङ्ग एप ह्वाट्सएपको यूजर संख्या २ अर्ब पुग्यो
इन्ट्यान्ट म्यासेन्जिङ्ग एप ह्वाट्सएपको यूजर संख्या २ अर्ब पुग्यो
Technology Khabar २ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार
काठमाडौं । इन्ट्यान्ट म्यासेन्जिङ्ग एप ह्वाट्सएपको विश्वभरमा २ अर्ब यूजर्स संख्या पुगेको छ । यसअधि २०१८ को आधिकारीक आंकडा अनुसार ह्वाट्सएपको १.५ अर्व यूजर्स रहेका थिए । ह्वाट्सएपलाई फेसबुकले २००९ मा किनेको थियो ।
ह्वाट्सएपका सिईओ विल क्याचकार्टले वालस्ट्रीट जर्नललाई कम्पनीले एन्क्रिप्शन पोलिसिमा कुनै बदलाव नगर्ने बताएका छन् । उनले ह्वाट्सएपलाई आवश्यक पर्दा कानुनी निकायलाई यूजर्सको च्याट्सको मेटाडाटा दिन पनि सक्ने जनाएका छन् ।
ह्वाट्सएपको प्राईभेसीलाई लिएर पटक पटक प्रश्न उठने गरेको छ, तरपनि कम्पनीले हालसम्म ईन्ड टू ईन्ड इन्क्रिप्सन दिने गर्दछ । ह्वाट्सएपको पेरेन्ट कम्पनी फेसबुकको कुरा गर्दा कम्पनीसँग हाल विश्वभरबाट करिव २.५ अर्व प्रयोगकर्ताहरुको साथ रहेको छ ।
हालैमा आएको एक रिर्पोटमा ह्वाट्सएपमा विज्ञापन दिने सन्दर्भमा हाल कम्पनीले रोक लगाइदिएको छ । विश्वभरमध्ये भारतमा ह्वाट्सएपको प्रयोगकर्ताहरुको संख्या अत्यधिक रहेको छ । यसै कारणले कम्पनीले भारत केद्रित सुबिधाहरु ल्याउन सुरु गरेको छ । कम्पनीले यसैको सुरुवात स्वरुप भारतमा ह्वाट्सएप पे ल्याउने तयारी गरिरहेको छ र यसमा भारत सरकारले पनि अनुमती प्रदान गरिसकेको छ ।
फेसबुकले गतवर्ष कम्पनीले क्रस प्लेटफर्ममा काम गरिरहेको बताएको थियो । यस अनुसार ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर र इन्स्टाग्राम यूज गरेर एक अर्को एपको यूजरहरुसँग कम्युनिकेट गर्न सकिने छ। तर कम्पनीले यस फीचरलाई कहिले सार्वजनिक गर्ने छ भन्ने कुरा भने हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । एजेन्सी
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार
दूरसंचार प्राधिकरणको पत्र बारे ठूला करदाता कार्यालयको जवाफ, एनसेलले लग्ला त फ्रिक्वेन्सी ?
१७ माघ २०७६, शुक्रबार
क्यान ईन्फोटेक माघ १३ गतेदेखि अायाेजना हुने
२८ पुष २०७३, बिहीबार
रोयल स्ट्याग मेगा म्युजिकद्वारा नेपाली तारा ३ मा गीतकार प्रतिस्पर्धा गरिँदै
२९ कार्तिक २०७१, शनिबार
अब रोबोटले समाचार लेख्ने, यस्ता छन रोबोटले लेख्ने समाचारका विषय
२३ असार २०७४, शुक्रबार
टेलिकमको नयाँ वर्ष अफर, अनलिमिटेड नाइट डाटा प्याक, एडीएसएलमा पनि सुविधा
३० चैत्र २०७४, शुक्रबार
सामसुंग ग्यालेक्सी एस सेभेन तथा एस सेभेन एज सार्वजनिक, शक्तिशाली ब्याट्री र माइक्रो एसडी कार्ड स्लट
१० फाल्गुन २०७२, सोमबार
यदि तपाईं सेकेन्ड ह्यान्ड स्मार्टफोन खरीद गर्न चाहनुहुन्छ, यी ५ प्रमुख कुराहरू ध्यानमा राख्नुहोस्
९ आश्विन २०७७, शुक्रबार
स्मार्टफोन ह्याङ्ग हुने समस्या भोगिरहनुभएको छ ? त्यसोभए यी ८ उपायहरु अपनाउनुस्
एप्पल आईडी पासवर्ड बिर्सनुभयो ? यस्तो छ एप्पल आईडी पासवर्ड रिसेट गर्ने सजिलो तरीका
यसरी हेर्नुस् आजदेखि शुरु हुने आईपीएलको लाइभ ब्रोडकास्ट र मोबाइल एपबाट लाइभ स्ट्रीमिङ्ग
३ आश्विन २०७७, शनिबार
अक्टोबरमा स्मार्ट टिभी बजारमा ल्याउने तयारी गर्दै स्मार्टफोन कम्पनी ओपो
फोर्स मोटर्सको “दशैं आशिर्वाद” आफर, १० लाखसम्म छुट
लकडाउनमा पोखरा र चितवनबासीलाई सेवा दिएको अनलाइन स्टोर ‘बरदान’ फैलँदै
टेक निर्यात इजाजतपत्रको लागि टिकटकको कम्पनी बाइटडान्सद्धारा चीनमा आवेदन
अमेरिकाको क्यालिफोर्निया २०३५ बाट पेट्रोल गाडीको किनबेचमा प्रतिबन्ध
८ आश्विन २०७७, बिहीबार
टेस्ला इंकका लगानीकर्ताले एकै दिन ५० अर्ब डलर गुमाए
रेनोको नयाँ क्वीड गाडी सार्वजनिक
६ आश्विन २०७७, मंगलवार
फोर्डको इलेक्ट्रिक एफ १५० पिकअप ट्रक निर्माण गर्ने प्लान्ट बनाउन शुरु